တရားတော်များ – Na Pann San
” သစ်တံခါးဆရာတော် ၏ ဝါဆိုလပြည့်နေ အဓိဌာန်တော်….”( ၃.၈.၂၀၂၀ တနင်္လာနေ့အတွက်)
Na Pann San W | August 1, 2020
ဝါဆိုလပြည့် ( ၃.၈.၂၀၂၀ တနင်္လာနေ့အတွက်) သစ်တံခါးဆရာတော် ၏ ဝါဆိုလပြည့်နေ အဓိဌာန်တော်…. ဘုရားရှင်အား မိမိနှစ်သက်ရာချိန်(အာရုံဆွမ်း နေ့ဆွမ်းချိန်) နံနက် ၅နာရီ ၅ မိနစ် သို့မဟုတ် ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ် အချိန်တို့တွင်…. သပိတ်ဖြင့် ဆွမ်းတော်ထည့်ပါ ။ ကပ်ပါ။ ၁။သစ်သီး ၁၀ မျိုး
Na Pann San W | July 5, 2020
ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့ (ဓမ္မစင်္ကြာနေ့ မှစ၍ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့) အထိ ရက်ပေါင်း( ၉၀ ) တိတိ စိပ်ရပါမယ်…. နှစ်တစ်နှစ်မှာ တကြိမ်သာ အဓိဌာန်အားထုတ်ခွင့် ရတဲ့ ဝါတွင်း ( ၃ )လ နဝင်းရက်ပေါင်း (၉၀) ဂုဏ်တော်(၉)ပါး အဓိဌာန် ပုတီးစိပ်နည်းလေးပါ… ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့ (ဓမ္မစင်္ကြာနေ့ မှစ၍ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့) အထိ
လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကို စောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်… မိမိကို ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ် စောင့်ရှောက်နေသလဲ သိချင်ရင် တွက်ကြည့်ပါ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ် စောင့်သလဲ….?
လူတိုင်း စိတ်ဝင်စားဆုံး တစ်ခု့ ရှိ ပါတယ် ။ အရေးကြုံရင် အားကိုး ရှာစမြဲပါ ။ တခါ တရံ အလွန်အမင်း သတ္တိရှိပါတယ် ဆိုတဲ့ သူတွေတောင် အခက်အခဲ အကျပ်အတည်း ကြုံတွေ့လာရင် အားငယ်ကြောက် စိတ်တွေဝင်လာတက် ပါတယ် ..အဲ့လို အချိန်အခါ မျိူးမှာ အားက်ုးရှာတက်ပါတယ်။ ဘုရား တရား
ခုချိန် လူဖြစ်နေသူ အားလုံးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၆၀၀ ခန့် တီထွေးဘဝ နဲ့အတူဆုံဖူးခဲ့ကြတယ် …..
လွန်ခဲ့တဲ့ သာသနာနှစ် ၂၆၀၀ ခန့် က ခု လူဖြစ်နေသူ အားလုံး ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင် မှာ တီထွေး ဘဝ နဲ့အတူဆုံဖူးကြ တယ် ဆိုရင် လက်ခံကြလား…?? (တီထွေ = လုံးထွေးနေသော တီကောင်များ ) လက္ခံ မခံ အသာထား ဗဟုသုတ ပြောပြ
ကမ္ဘာကျော် နပန်းသမားဘဝ ရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ စည်းစိမ်တွေ ကို စွန့်လွှတ်ပြီး ရဟန်းဝတ်နေ တဲ့ ကိုယ်တော်နှစ်ပါး
Na Pann San W | June 22, 2020
လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ စွဲလမ်း စိတ်တွေ၊ အတ္တတွေ၊ မာနတွေ၊ လောဘတွေ ၊ စည်းစိမ်းတွေကြား မှာ ယစ်မူး အချိန်ကုန် နေတတ်ပြီး မတည်မြဲသော အရာ ကို တည်မြဲ တယ် ထင်မှတ်ကာ ရန်သူမျိုး ( ၅ ) ပါး ကိုတောင် မကြောက်တော့ ဘဲ တတ်မက်နေ
” တရားထိုင်တာ နဲ့ ဘုရားစာရွတ်တာ ၊ ဥပုသ်စောင့်တာ ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲ …”
ဓမ္မအမေးအဖြေ မေး။ ။ အရှင်ဘုရား – တရားထိုင် လို့ရတဲ့ ကောင်းကျိုး နဲ့ ဘုရား စာရွတ်ဖတ်ပြီး ဘုရားရှိခိုးတာ ၊ ဥပုသ်စောင့် တဲ့ ကောင်းကျိုး နဲ့ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး စိတ်ငြိမ်းချမ်း မှုကို ပိုရနိုင် ပါလဲ ဘုရား။ ဖြေ။ ။ ဘုန်းဘုန်း က
Na Pann San W | June 20, 2020
” က မ္ဘာ့ဒုတိယ အခက်အခဲဆုံး (သို့ မ ဟုတ် ) အဘိဝံသ စာမေးပွဲ ” တိပိဋကတ် စာမေးပွဲပြီး ရင် ဒုတိယ အရမ်း ခက်ခဲလှ ပါသော သကျသီဟ အဘိဝံသစာမေးပွဲကြီး တွင် မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမ ဂုဏ်ထူးဖြင့် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့ ပါသော
” သေချင်​​လောက်​​အောင်​ ကံဆိုး​နေပါ​စေ ဘယ်​ ​ဗေဒင်​၊ ယတြာ မှ မလို ဒီဂါထာ ထုံ​အောင်​သာရွတ်​​နေပါ.. “
သေချင်​​လောက်​​အောင်​ ကံဆိုး​နေပါ​စေ…ဘဝ​မျော်​လင့်​ချက်​ ​ပျောက်​​နေပါ​စေ … အ​ကြွေး​တွေပိ စိတ်​​မျော်​ဝင်​​ငွေမရှိမိသားစု​ရေး အိမ်​တွင်း​ရေး အလုံးစုံညံ​နေပါ​စေ…စိတ်​ဓာတ်​ကျပြီး အထီးကျန်​ စိတ်​အရူးတပိုင်းဖြစ်​​နေအုန်း..ဒီ​တောင်​ကို ​ကျော်​နိင်​ပါ့မလား​တွေးပူ​နေသူများ ..ဘယ်​​ဗေဒင်​ ယတြာ မှ မလိုအပ်​ပါ …ထုံ​အောင်​သာ ရွတ်​​နေပါ ဇလွန်​ပြည်​​တော်​ပြန်​ဂါ​ထာ​တော်​ကြီး ထူးကို ထူး​စေပါသည်​ တကယ်​လုပ်​ရင်​ တကယ်​ဖြစ် … Unicode သခေငျြလောကျအောငျ ကံဆိုးနပေါစေ …ဘဝမြျောလငျ့ခကျြ ပြောကျနပေါစေ
အမွေ ၉.၆ ဘီလီယံကို စွန့်လွှတ်ပြီး ရဟန်းအဖြစ်ခံယူ လိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် မလေးရှားသူဌေးကြီး ၏ သား
Na Pann San W | June 13, 2020
အတော်ကို လေးစား ထိုက်သူ တစ်ဦးပါ ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မိဘချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အပေါ် မပျော်မွေ့လိုတော့ တာကြောင့် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်း အဖြစ် ခံယူလိုက်သူ တစ်ယောက်ပါ ။ နာမည် ကတော့ Ajahn Siripanno ဖြစ်ပြီး အဖေလုပ်သူ Ananda Krishnan သူဌေးကြီးဆီ က
နယုန်လပြည့်နေ့ ( ၅.၆.၂၀၂၀ ) နေ့ တစ်ရက် တွင်သာ ပြုလုပ်ရမည့် ကံပွင့် ကံမြှင့်စေရန် ယတြာ
ကံပွင့် ကံမြှင့်စေရန် ယတြာ (နယုန်လပြည့်နေ့ ( ၅.၆.၂၀၂၀ ) နေ့ တစ်ရက်တွင်သာ ပြုလုပ်ရမည် ) နှင်းဆီပန်း- ၅ ပွင့် သပြေပန်း- ၅ ခက် လမုန့် – ၅ ခု တိုိ့အား လင်ဗန်းတစ်ချပ် ထဲတွင် လှပအောင်ပြင်ဆင်၍ ထည့်ပြီး ဖယောင်းတိုင်( ၅